Translations < Burmese < Twenty Twelve < GlotPress Translate WordPress.com
Translation of Twenty Twelve: Burmese	Glossary
The 2012 theme for WordPress isafully responsive theme that looks great on any device. Features includeafront page template with its own widgets, an optional display font, styling for post formats on both index and single views, and an optional no-sidebar page template. Make it yours withacustom menu, header image, and background.	 ၂၀၁၂ အခင်းအကျင်းသည် မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆို လှပစွာတွေ့မြင်နိုင်သည့် တုံ့ပြန်လွယ်သော အခင်းအကျင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ကိုယ်ပိုင် ဝစ်ဂျက်များပါဝင်သော ရှေ့စာမျက်နှာ တန်းပလိတ်ပါဝင်ပြီး၊ ဖော်ပြလိုသော ဖောင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အညွှန်းနှင့် တစ်ခုခြင်းကြည့်ရှုမှုများအားလုံးတွင် စာမူပုံစံအမျိုးအစားများအား စတိုင်ပုံစံထည့်သွင်းထားသည်။ ဘေးဘားမပါသော တန်းပလိတ်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ရန် ပါဝင်သည်။ သင့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံဖြစ်စေရန် စိတ်ကြိုက်မီနူးများ၊ ခေါင်းစီးရုပ်ပုံနှင့် နောက်ခံတို့ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။	 Details
၂၀၁၂ အခင်းအကျင်းသည် မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆို လှပစွာတွေ့မြင်နိုင်သည့် တုံ့ပြန်လွယ်သော အခင်းအကျင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ကိုယ်ပိုင် ဝစ်ဂျက်များပါဝင်သော ရှေ့စာမျက်နှာ တန်းပလိတ်ပါဝင်ပြီး၊ ဖော်ပြလိုသော ဖောင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အညွှန်းနှင့် တစ်ခုခြင်းကြည့်ရှုမှုများအားလုံးတွင် စာမူပုံစံအမျိုးအစားများအား စတိုင်ပုံစံထည့်သွင်းထားသည်။ ဘေးဘားမပါသော တန်းပလိတ်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ရန် ပါဝင်သည်။ သင့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံဖြစ်စေရန် စိတ်ကြိုက်မီနူးများ၊ ခေါင်းစီးရုပ်ပုံနှင့် နောက်ခံတို့ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
2014-09-05 08:33:19 GMT